I-beta kawonkewonke ye-Android Q iza kwiXiaomi Mi 9 kunye neRedmi K20 Pro | I-Androidsis
Kanye njengokuba i-OnePlus ibonakalisiwe njengenye yeemveliso ze-smartphone ze-smartphone ezixhalabileyo malunga nokugcina izixhobo zazo zisemgangathweni ngohlaziyo lwamva nje, uXiaomi ukwamele oku kulunga. Kodwa asithethi kuphela ngee-OTA ezilula, kodwa nangeenguqulelo ze-beta Android Q, inkqubo yokusebenza elandelayo ezi nkampani zombini beziziphumeza kwezinye iitermina zazo ngeendlela ezahlukeneyo zovavanyo ezikhutshwe kuyo.
Kwasekuqaleni kukaJulayi, uXiaomi wakhupha i-beta ye-Android Q ye Siyi9 y Redmi K20 Pro -yaziwa njenge Xiaomi Mi 9T Pro ngaphandle kwe China ne India - kodwa hayi esidlangalaleni nangendlela evulekileyo. Ithetha ntoni le nto? Ewe, lilinani eliqingqiweyo labasebenzisi abakwaziyo ukufikelela kulo, ngelixa uninzi lwalungekho. Nangona kunjalo, ngoku iyaqala ukufumaneka eTshayina kwabo bafuna ukufumana amanqaku akutshanje eGoogle OS.
Abo bakwiROM yamaTshayina kuphela kwabo banokuthatha inxaxheba ngoku, okulusizi ngandlela ithile, kuba kwakuthenjwe ukuba, bonke kanye, bonke abasebenzisi banokuyifumana. Silindele ukuba iiyunithi zehlabathi zifikelele kwi-beta nayo, nangona ingathatha ixesha.
I-MIUI esekwe kwi-Android Q ayizukuzisa utshintsho olukhulu kunxibelelwano lweefowuniKodwa uya kuba nemfihlo ngakumbi kwiimvume ezikhethekileyo ze-app, nkqu nakwiapps ezisebenza ngasemva.
IXiaomi Mi 9 kunye neRedmi K20 Pro okanye iXiaomi Mi 9T Pro azibonisi umohluko omkhulu phakathi kwabo, Ngaphandle kweminye imiba enjengoyilo, isikrini, ikhamera yangaphambili kunye nezinye, kodwa hayi kwinqanaba leprosesa, i-RAM kunye namanye amacandelo. Ngokubanzi, ziziphelo ezinje ngokufanayo, nangona le yokugqibela itsale ingqalelo engaphezulu kunaleyo yenziwe yiMi 9 kumzuzu wayo wokuphehlelelwa, ewe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » UXiaomi uqala ukukhupha i-beta yoluntu ye-Android Q ye-Mi 9 kunye neRedmi K20 Pro
Uhlaziyo lweTelegram ngemowudi ecothayo, imiyalezo ethuleyo kunye nokunye